Warqad la sheegay inuu qoray madaxweynaha Jubaland oo lagu faafiyey website-yada soomaalida.
Isniin, 27 Maarso 2017 13:21 | Qoraaga: Tafatiraha | Kismaayo (Afdheer) Waxaa la arkay qoraal leh logada dowlad gopboleedka Jubaland oo la sheegay inuu qoray madaxweyne Axmed Maxamed Islam (Axmedmadoobe) warqadaas oo madaxweynuhu ku qoray magaca ninka uu doonayo in lagu daro golaha wasiirada Soomaaliya.
Sida warqada ka muuqata madaxweyne Axmed-madoobe ayaa u sheegay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in sida uu hore ugu sheegay booska wasiirka federaalka Soomaaliya la geeyo nin ka soo jeeda beesha Cowlyahan isagoo ku sababeeyey nidaam awood qeybsi ah, sida ka muuqata qoraalkaas madaxweynaha Jubaland ayaa diiday in lagu qoro nin ay isku jifo yihiin isaga.
Qoraalkan ayaa loo ekeysiiyey in la qoray ka hor intaan la magacaabin golaha wasiiradda soomaaliya.
Ninka uu doonayey in lagu qoro golaha wasiirada ayaa lagu sheegay Cabdirashiid Jire oo hadda ah wasiirkiisa maaliyadda ee dowlad goboleedka Jubaland halka sida la sheegay uu diidanaa in lagu qoro wasiir hore Cabdullahi Ciilmooge.
Ma la rumeysan karaa: MAYA
Markaan akhrino qoraalkan waxaan fahmeynaa in uu yahay qoraal uusan qorin shaqsi masuul ah laakiin uu yahay qoraal fitin ah oo la doonayo in lagu dhaawaco sharafta madaxweynaha Jubaland.
Qoraalka la faafiyey wuxuu leeyahay loogada dowlad goboleedka Jubaland wuxuuna ku socdaa ra`iisul wasaaraha Soomaaliya logada Jubaland iyo saxeexa waxaa lagu sameyn karaa photoshop.
Ma kula tahay in madaxweyne qoraalakan oo kale intuu qoro u gudbinaayo Farmaajo iyo Kheyre oo uusan aqoon iyo macaamil hore oo ka dhaxeeyey uusan jirin laakiin la doortay Febraayo 2017 jawaabtu waa MAYA.
Qoraalkan waa been abuur foojari ah oo aan sal iyo raad toona laheyn kuwa faafiyeyna waa kuwii jubaland diidka ahaa ee weligood jalaafeynaayey kuna tilmaamayey in dad ka soio talaabay Kenya iyo Itoobiya jubaland qabsadeen.